China Ezemidlalo LED Isibonisi P Series Ukukhiqiza kanye Factory |I-AVOE
Ikhabhinethi ye-Mg Alloy 1280*960*86mm
Usayizi wemojuli: 320 * 160mm
Ukukhanya okuphezulu kuphela 26Kg
Ibanga elingangeni manzi IP65
Ukukhipha ukushisa okuhle kakhulu
Isicelo: Ipherimitha yenkundla yebhola likanobhutshuzwayo, ipherimitha yenkundla yeBasketball, imisebenzi yezemidlalo, njll.
Izikrini ze-LED zenkundla yezemidlalo zifaneleka kakhulu ezindaweni eziminyene, ikakhulukazi ezinkundleni zebhola lezinyawo noma ze-basketball.Izithombe zayo ezinokulungiswa okuphezulu nama-engeli wokubuka abanzi aqinisekisa izithombe namavidiyo wekhwalithi engcono kakhulu kuwo wonke amagumbi enkundla.
I-Sports Peripheral LED Screen Display iyisibonisi esikhulu se-LED esinobubanzi obubanzi kakhulu nobude obufushane.Ibhodi lokukhangisa ledijithali le-LED elizungezile liyasebenza, futhi imilayezo yokukhangisa eqhubekayo noma Amalogo Ebhizinisi aboniswa ezikrinini ze-LED kuwo wonke umjikelezo wenkundla yezemidlalo enkundleni.Uhla lwezibonisi ze-LED ezinyakazayo esizihlinzekayo zenkundla yebhola kulula ukuzifaka nokususa.Isikrini se-LED asinawo amanzi futhi singavimbela noma iyiphi indawo yenkundla (njengamanzi, imvula, uthuli) ukuhlasela.
1. IP65 ingangeni manzi, i-anti-ultraviolet, ukumelana nomoya, ukumelana nokuzamazama komhlaba
2. Isakhiwo sesisekelo siyalungiseka, qinisekisa imidlalo yewashi engcono ukusuka engeli elihlukile lokubuka
3. Ikhabethe le-Mg Alloy die-cast, elincanyana futhi elingasindi, likhishiwe igwebu, lingasetshenziselwa isikrini se-LED sesiteji sokuqashwa.
4. Ukuvikela imaski ethambile, vikela umzimba womsubathi ukuze ungalimazi futhi nesibani se-LED asiphukanga kakhulu
1. I-Outdoor Sports Field Isibonisi Sesikrini se-LED
1. Isikrini Esikhulu & AMABHAYIBHELI E-Elektroniki
Izikhangiso ezixhasayo, ukusakazwa bukhoma kwevidiyo, ulwazi olubalulekile, nama-Brand Logos angaboniswa esikrinini esikhulu se-LED.Yiqiniso, zingasetshenziswa futhi njengebhodi lamaphuzu.Ungakha isikrini esikhulu esilingana nomjikelezo wenkundla yakho.Unquma ukuma nosayizi.
Isikrini sokubonisa se-LED singasetshenziswa ukubonisa izikhangiso eziningi kugeyimu eyodwa, futhi umxhasi wakho angashintsha kalula ulwazi lwaso, ngaleyo ndlela akhe umqondo omusha womxhasi.
2. Ukuvikelwa Kochwepheshe
Umcamelo okhethekile wokuvikela u-Eva phezulu kwekhabethe le-LED ukuvikela abadlali bebhola ekulimaleni phakathi nemidlalo.Imaski yerabha ye-silicon nokuthambile nokuvumelana nezimo ukuvikela umdlali namabhola ekulimaleni.Umzimba ozinzile uvikela isibonisi kunoma yimuphi umonakalo, ngisho nebhola elinesivinini esiphezulu noma ibhola likanobhutshuzwayo.
1. Kulula Ukuthwala
Isikrini sokubonisa senkundla yezemidlalo i-LED inobakaki wokudonsa ongemuva ohlanganisiwe, olungele ukuthuthwa nokufakwa.Vele udonse ubakaki phansi futhi isikrini se-sports display LED singasekelwa phansi.
2. Indawo ebanzi yokubuka
Isikrini se-LED senkundla yezemidlalo sine-engeli yokubuka ebanzi engu-140°, engabukwa izethameli eziningi.Ikhwalithi yesithombe ihlala ingenamthungo kuzo zonke izinhlangothi namabanga, isethulela okukhiphayo okufanayo kwekhwalithi ephezulu kuzo zonke izethameli.Lokhu kuyenza ifanelekele imibuthano emikhulu.
4. Izinga le-IP eliphezulu & Iphephile futhi Ithembekile
Isibonisi se-LED senkundla yezemidlalo yangaphandle ye-SMD P8 noma i-P10 yakhelwe ngokukhethekile ukungenwa amanzi, ukuvikela uthuli, nokuvikelwa kwe-UV ukuze kuqinisekiswe ukusetshenziswa okungaphazamiseki kwangaphandle.Isilinganiso se-IP ephezulu siqinisekisa ukuphuma kwekhwalithi ephezulu ngaphansi kwanoma yiziphi izimo.
Ukukhanya Okuphezulu & Ikhwalithi ephezulu
Isikrini se-LED senkundla yezemidlalo sinemisebenzi ethuthukisiwe njengokukhanya okungaphezu kuka-6000cd/sqm.Lungisa ukukhanya ngokwendawo yokufaka (Inketho).
Ukuze ugweme ukulimala komkhiqizo ngesikhathi sokuhamba futhi uqinisekise ukuphepha komkhiqizo, upakishwa ku-Flight Case ukuze ugcinwe futhi udluliselwe kalula.
Okwedlule: I-AVOE Eqashisayo ye-LED Display R Series
Olandelayo: Inkundla ye-LED Display
Uphahla Lwetekisi Olunezinhlangothi Ezikabili Ngaphandle Olugcwele I-LED D...
X16 LED Isilawuli
LRS-350-5 Ukunikezwa kwamandla kwe-LED
I-MCTRL 660 isilawuli se-LED
Isibonisi SeLED yangaphandle Isikrini seLed yangaphandle Isikrini Esiholayo Isibonisi seLED Isikrini sokubonisa esiholelekile Uphawu lweLed